ကုန်ကြမ်းက S-23 အမှုန့် (1010396-29-8) ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker ဓာတု
SKU: 1010396-29-8 အမျိုးအစား: Sarm စီးရီး
ကုန်ကြမ်းက S-23 အမှုန့် (1010396-29-8) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်းက S-23 အမှုန့် (1010396-29-8) ဖေါ်ပြချက်
ကုန်ကြမ်းက S-23 အမှုန့်တစ်အလားအလာအထီးဟော်မုန်းတားဆေးအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကိုဖြစ်ပါသည်ထားတဲ့ SARM ကိုခေါ်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုလူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆေးပြားများနှင့်တောင့မှတဆင့်မှတဆင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာက, S ကို 23 နှုတ် bioavailable ။ လေ့လာရေးခန္ဓာကိုယ်အဆီလျော့ကျလာနေချိန်တွင်ပိန်ကြွက်သားများနှင့်အရိုးထုထည်နှစ်ခုလုံးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ S23 ပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာပိုပြီးအပြင်းအထန် (1.7nM တစ်ကီနှင့်အတူ) ထိုသို့သော Andarine အဖြစ်အဟောင်းတွေဆေးဝါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်အန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) အားဆက်သွယ်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အလေ့လာမှုများအတွက်ဒါဟာအန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုမှဟို၏ကောင်းသောအချိုးအစားနှင့် spermatogenesis ၏ထိုး-မှီခိုဖိနှိပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးပြသ သုတေသန၏ချုပ်ရာပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူအတူ။
ကုန်ကြမ်းက S-23 အမှုန့် (1010396-29-8) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်းက S-23 အမှုန့်
ဓာတုအမည် (S) မ -N- (4-cyano-3-trifluoromethyl-phenyl) -3- (3-fluoro, 4-chlorophenoxy) -2-hydroxy-2-methyl-propanamide, ရော်က S-23 အမှုန့် SARM, UNII-XDK89456WM , CHEMBL512283, XDK89456WM, CCTH-methylpropionamide, SCHEMBL2816700, BDBM26261, DB07419 C-31, S ကို 23, B5R
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား SARMS, inhibitors
CAS အရေအတွက် 1010396-29-8
InChIKey SSFVOEAXHZGTRJ-KRWDZBQOSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C18H13ClF4N2O3
မော်လီကျူး Wရှစ် 416.7540328
အရည်ပျော် Point 133-136 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ 11.9 နာရီ
Solubility Propylene Glycol, DMSO, အီသနော။
ကုန်ကြမ်းက S-23 အမှုန့်တစ်ဦးpplication ကုန်ကြမ်းက S-23 အမှုန့်ဆေးပြား / တောင့, အထီးဟော်မုန်းတားဆေးအဖြစ်သုံးစွဲဖို့ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်, အဆီလျှော့ချ
က S-23 ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor Module (SARM) လို့ခေါ်တဲ့မူးယစ်ဆေးအသစ်တခုလူတန်းစားကပိုင်ဆိုင်သည်။ SARMs ကိုယ်ခန္ဓာ၏တိကျသောစိတျအပိုငျးမှာရှိတဲ့ဟော်မုန်း receptors မှ binding အားဖြင့် testosterone ဟော်မုန်းကိုတု။
testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အခြား SARMs ဆင်တူ S-23 အမှုန့်ကြွက်သားတိုးတက်မှုနှင့်အရိုးကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက်ကြွက်သားများနှင့်အရိုးတစ်ရှူးပစ်မှတ်ထား။ ဒါကြောင့်ဆီးကျိတ်ပျတိုးစေပါဘူးဒါကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းမတူဘဲ S-23 အမှုန့်ဆီးကျိတ်တစ်ရှူးပစ်မှတ်ထားမထားဘူး။ ဆန့်ကျင်တွင်, လေ့လာမှုများ S23 ဆီးကျိတ်၏အရွယ်အစားကိုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသပါ။
က S-23 အမှုန့်ဟာကာယဗလအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည်။ ဒါဟာကြွက်သားထုထည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်မျှသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိခြင်းစဉ်အားလုံးအဆီလျော့ကျလာမှာစွပ်စွဲထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် S-23 အမှုန့် Post-သံသရာကုထုံး (ရာခိုင်နှုန်း) လိုအပ်မှအသုံးပြုသူများကိုလိုအပ်ပါတယ်သော testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ပျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှု၏ S-23 အမှုန့် (1010396-29-8) ယန္တရား
SARMs အရိုးတို့ကိုနှင့်ကြွက်သားများတွင်တည်ရှိသည်ဖြစ်သောအန်ဒရိုဂျင် receptor များမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုစညျးခွငျးအားဖွငျ့အလုပ်မလုပ်။ သူတို့ရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသော SARMs selection ၏ကွဲပြားအဆင့်ဆင့်ရှိသည်။
S-23 SARM ဒါထိရောက်သောစေသည်အရာကိုအပိုင်းအန်ဒရိုဂျင် receptor များနှင့်အတူသူ့ဟာသူခညျြနှောငျရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်က S-23 အရိုးနှင့်ကြွက်သားပေါ်မှာအလွန်ထူးခြားတဲ့နှင့်ရှုပ်ထွေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့်တစ်ဦး SARM ကြွက်သားပရိုတိန်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်မျိုးဗီဇကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်မှသူ့ဟာသူ binding ဖွငျ့ဤပါဘူး။ activated သောအခါ, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ receptors ထို့နောက်အရိုး-တည်ဆောက်ခြင်းဆဲလ်တွေကိုလှုံ့ဆော်ကူညီပေးပါမည်။
က S-23 ယင်း၏တားဆေးဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်, ဒီအထူးသဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသာယာယီသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည့်အပြင် LH နဲ့ FSH ဖိနှိပ်မှုများအတွက် knack ရှိပါတယ်။ အထီးကြွက်အပေါ်ပြုမိသုတေသနအပေါ်အခြေခံပြီး S-23 11.9 နာရီတစ်ဝက်ဘဝရှိပါတယ်။ နှုတ်ယူသည့်အခါခန္ဓာကိုယ် SARM ၏အကြောင်းကို 96% စုပ်ယူနှင့်သုံးစွဲသူများ4နာရီသို့မဟုတ်ဒီတော့ပြီးနောက်အထွတ်အထိပ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား က S-23 အမှုန့် (1010396-29-8) ၏
▪က S-23 ကြွက်သားအားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်းနှင့်ဆီလျှော့ချ
▪က S-23 အရိုးခွန်အားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
▪က S-23 အမျိုးသမီးလိင် Motivation တိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
အကြံပြုက S-23 အမှုန့် (1010396-29-8) သောက်သုံးသော
ငါတို့သည်တစ်ခုတည်းသောသောက်သုံးသောသတင်းအချက်အလက်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံသည်။ ဥပမာ, ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက် 0.1 ဖြစ်စေနှုတ်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးမှတဆင့်, သုတေသနကာလအတွင်းတစ်နေ့လျှင်မီလီဂရမ်3မှတစ်နေ့လျှင် MG ပေးထားခဲ့ကြသည်။
အများစုမှာကာယဗလမူးယစ်ဆေးရဲ့ထက်ဝက်-ဘဝတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်နှစ်ခုထဲသို့သောက်သုံးသောခွဲထုတ်စဉ်တစ်နေ့လျှင်မီလီဂရမ် 10 မှ 30 ယူပါ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိအများစုမှာသုံးသပ်ရေးသူတို့အနေနဲ့ 23-ရက်သတ္တပတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်က S-8 ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကြောင်းပြောကြသည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး က S-23 အမှုန့် (1010396-29-8) ၏
▲ ကြူးကျြောမှု။ အဲဒီမှာက S-23 ယူပြီးစဉ်တိုးပွားလာအမျက်ဒေါသ၏အစီရင်ခံစာများပါပြီ, ဒါကြောင့်အမျက်ဒေါသကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးသမိုင်းရှိသည်သောသူတို့အဘို့ကိုအကောင်းဆုံး option ကိုမဖွစျနိုငျတယျ။
▲ testosterone Shutdown။ အသုံးပြုသူများအရ S-23 သင် SARM ဈေးကွက်ထဲမှာရနိုင်ကြောင်းသမားရိုးကျ steroids ဖို့အနီးကပ်ဆုံးအရာဖြစ်၏။ ဤသည်ကတခြား SARMs ကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အတူပြုလုပ်ထူးခြားတဲ့နှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်စေသည်။
▲ မှောင်ဆီး.S-23 တစ်မဲမှောင်ဆီးအရောင်ထုတ်လုပ်ပြသခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်ဒီဘေးထွက်သက်ရောက်မှုကိုလည်းယာယီသည်နှင့်သာသင်က S-23 နှင့်အတူစက်ဘီးနေစဉ်တွင်ကြာရှည်ခံသည်။
▲ ဂှေးစေ့ကိုကျုံ့အချို့ကာယဗလက S-23 သုံးနေစဉ်မိမိတို့၏ဝှေးကျုံ့သတိပြုမိကြနှင့်ဤနောက်ပိုင်းတွင်တူညီတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြသသောသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုကထောက်ခံခဲ့သည်။